मोदीले किन गरिरहेछन् कोरोनाविरुद्ध घरघरमा विजुली बत्ती निभाउन र दियो बाल्न आग्रह ? यस्तो रहेछ ज्योतिषीय रहस्य ! – " सुलभ खबर "
मोदीले किन गरिरहेछन् कोरोनाविरुद्ध घरघरमा विजुली बत्ती निभाउन र दियो बाल्न आग्रह ? यस्तो रहेछ ज्योतिषीय रहस्य !
काठमाडौं, २३ चैत । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार विहान एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै सम्पूर्ण भारतीयहरुलाई अप्रिल ५ तारिक आइतबारका दिन राती ९ बजे ९ मिनेटसम्म दियो वा मैनवत्ती बाल्न आग्रह गरे ।